आजको पत्रपत्रीका बाट Archives - Page 144 of 145 -
काठमाडौं । पुर्वी तराईमा शीतलहरुसँगै बढेको चिसोले कठ्यांग्रिएर एक सातामा नौजनाको ज्यान भएको छ । यसरी ज्यान गुमाउनेमो सप्तरी ६ र रौतहटका ३ जना छन् । दिउँसोमा हुस्सु र रातिमा शीतलहरुले केही दिनयता तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको छ । चिसोका कारण बालबालिका र वृद्ध बिरामी पर्न थालेका छन् । आजको नागरिकमा यो खबर छ ।...
काठमाडौं । अस्वस्थताका बाबजुद एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता र सरकार नेतृत्वका विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । आफूनिकट नेताहरूसँग एकताका विभिन्न खाकाबारे मंगलबार र बुधबार छलफल गरेका ओलीले शुक्रबार बिहान वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग एक्लै छलफल गरेका थिए। ...
गठबन्धनका ३ गाँठा: मुल नेतृत्व कस्तो-कसको ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभागृहबाट असोज १७ मा बाम गठबन्धन घोषणा गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भनेका थिए, - 'चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्छौ ।' त्यो घोषणालाई मुर्तरुप दिन 'पार्टी' एकता संयोजन समिति' ले काम गर्ने भनिएको थियो । गठबन्धनको घोषणा सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै उल्लेख भएअनुसार समित...
सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने: प्रदेशका सदस्यको शपथ काठमाडौंमै
काठमाडौं । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने भएको छ । प्रदेश राजधानीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कन थालेपछि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने गृहकार्य तत्काललाई थाती राखेको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । प्रदेश ...
‘काठमाडौं सभ्यता जोगाउन’ भित्री क्षेत्र चारपाङ्ग्रे मुक्त
दुई महिनाअघि असन सवारीमुक्त अभियान सुरु हुँदा स्थानीयलाई यही दुबिधा थियो। यसले किनमेल गर्न आउनेको संख्या घटेर व्यापार प्रभावित हुने भन्दै उनीहरू आत्तिएका थिए। यही अलमलले सवारीमुक्त अभियान अलमलियो। स्थानीयको शंका दूर भएको छ। उनीहरू आर्थिक मात्र होइन, सवारीमुक्त हुँदा असनको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्व बढ्नेमा ...
कस्तो छ केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडौं । कडा खालको झाडापखालाले अस्वस्थ बनेका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तंग्रिन थालेका छन्। तीन दिनअघि उनलाई झाडापखाला भएपछि पूर्वनिर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अनुपस्थित रहँदै आएका थिए। सोमबारदेखि अस्वस्थ रहेका ओलीलाई झाडापखालाले तीन दिनसम्म बेस्सरी च्यापेको थियो। ओलीका निजी च...